Ungawuthola kanjani ibhizinisi lakho ngokusebenzisa inkingeni ngeSemalt?
Ngenkathi yentuthuko engenakulibaleka ye-Intanethi nethonya layo elandayo, ukuba khona kwebhizinisi elingabizi futhi eliphumelelayo akunangqondo ngaphandle kokudala iwebhusayithi yakho. Noma kunjalo, isiza akufanele sakhiwe kuphela kodwa futhi sisebenze kahle futhi sitholakale kalula ngamakhasimende kanye nabancintisana nabo ngesiphequluli. I-SEO yale webhusayithi izokuvumela ukuthi ukhiphe inkampani yakho enkingeni futhi idonsele amakhasimende amasha indawo.
Ukumaketha okunekhono empeleni kufaka phakathi i-SEO yangaphakathi, ukusebenza kwemithombo yangaphandle, kanye ne-SERM, okusho ukuthi ukusebenza ngedumela lenkampani kwi-Intanethi. Ukwenza imisebenzi eshiwo ngenhla kuzosiza ukuheha abathengi, abasebenzi, noma abalingani; ngcono idumela lenkampani phakathi kwemiphumela yokusesha; khuphula inani lempahla noma imisebenzi yama-oda; khulisa ukwethenjwa kwezithameli ezihlosiwe; qinisekisa ukufinyelela okuphezulu komkhiqizo.
Ngakho-ke, indawo ayigcini nje ngokwandisa ithrafikhi kepha futhi iqala ukusebenza nabavakashi kahle kakhulu.
Kungani ukhethe uSemalt?
Kumsebenzisi, okokuqala ebhekene nokukhushulwa kwe-SEO kumasayithi, kunzima ukukhetha phakathi kwamathuba amaningi we-SEO elilodwa elinikezwayo. Uma izigidi zemithombo yokuncintisana e-inthanethi ivimbela isiza sakho ekutholeni izinga eliphakeme leGoogle, uma ithrafikhi yesayithi isephansi, naphezu kwenani elanele labathengi abangaba khona, uSemalt uzothuthukisa ibhizinisi lakho ezingeni elilandelayo.
Thola i-Semalt njengendlela yokumaketha yobuchwepheshe kanye nensizakalo yokuSesha Injini yokucinga, ezoba elinye lamathuluzi asebenza kahle kakhulu ekwakheni insiza yakho eku-inthanethi. Uhlelo lokuphromotha olusetshenziswa yinkampani yethu luwonke wonke futhi lufanele cishe zonke izinhlobo zamabhizinisi online. Ukusebenza kweinjini zokucinga zeSemalt kuzokuvumela ukuthi usungule ukugeleza njalo kwabasebenzisi be-Intanethi abahlosiwe esizeni. Lokhu kungenxa yokuthi inqubekela phambili etholakala ngokusebenza kahle ayishabalali, yingakho isayithi lizoqhubeka nokuthola ithrafikhi ngisho nangemva kokuqedwa ngokuphelele komsebenzi owenziwe nge-SEO.
ISemalt izokusiza ekutholeni umthombo omkhulu wethrafikhi otholakala kwi-Intanethi. Njengoba okungenani uhhafu wabo bonke abavakashi besayithi bevela ezinjini zokucinga.
Ngenxa kaSemalt, uzoheha izivakashi ezinentshisekelo, eza kuwebhusayithi kusuka kusesho lwakho ukukusesha, izinsizakalo zakho, imikhiqizo, noma imininingwane.
Kuyafaneleka futhi ukubheka ukuthi i-search traffic imahhala! Awudingi ukukhokhela ukuchofoza noma ukuxhumeka kwiwebhusayithi yakho kusuka ekhasini lemiphumela yokucinga.
Uma ukhathazekile ukuthi ukuze ukwazi ukwenza kangcono izinsiza ezisezingeni eliphezulu, iqembu lonke labachwepheshe kanye nenyanga engaphezu kwenyanga yomsebenzi liyadingeka, sizokuqeda ukungabaza kwakho. Ochwepheshe bethu bazokhumbula izifiso zakho bese beqedela umsebenzi ngokushesha okukhulu. Ngaphezu kwalokho, isidingo sokuvuselela njalo idatha kusayithi futhi ukhuphule isisindo sokuxhumanisa siyabhekwa.
Abasebenzisi inkampani yabo ayikwazi ukunqumela ngokuzimela ngaphambili komsebenzi wokumaketha usesho ngokuya ngecebo labo lokumaketha lomhlaba, iSemalt izosiza ngokukhethwa kwezindawo ezibaluleke kakhulu. Lokhu kuzogxila emizamweni yochwepheshe be-SEO-nabathengisi emsebenzi owodwa futhi bafeze ukusebenza kahle okukhulu.
USemalt uzokusiza nge:
Ake siqhubekele engxoxweni eningiliziwe yemisebenzi ongayithola neSemalt.
Ngokugxila kakhulu ekwakheni ikhwalithi ephezulu kuzo zonke izindlela iwebhusayithi, ungalahlekelwa ukusebenza kwayo kwangempela. Wabaqalayo emkhakheni wokusebenziseka okuhle kokucinga, sethula umkhankaso we-AutoSEO, okhombisa imiphumela emihle ngesikhathi esifushane.
Ungasebenzisa lo msebenzi ukukhuthaza amaphrojekthi akho noma ukuthuthukisa inkonzo yamakhasimende. Kodwa-ke, ngaphandle kokuthandwa ngabathengi, i-AutoSEO inikeza ikhwalithi ephezulu yekhasi. Ngokusekelwe ocwaningweni lwamagama angukhiye nemibiko yokuhlaziywa kwewebhu, lo mkhankaso uzokusiza ukuthuthukisa ukubonakala kwewebhusayithi futhi wakhe izixhumanisi.
Ngasikhathi sinye, kungumsebenzi onamagama asemqoka abaluleke kakhulu kwi-SEO. Ukuhleleka kwamagama angukhiye kukusiza ukuthi ukhethe ngqo imishwana, okuyiyona ehamba phambili kusiza sakho.
Lo mnikelo uzozuzisa kakhulu kubaphathi be-web, ama-freelancers, abanikazi bamabhizinisi amancane, nokuqalisa.
Ngabe uzichaze kahle izinto eziza kuqala kuwe futhi uhlose ukukhulisa ukuthengisa, inzuzo kanye nokubambisana okunenzuzo? Ngemuva kwalokho i-FullSEO ilungele wena. Kubandakanya ukuthuthukiswa kanye nokuqaliswa kwecebo elithile labathengi le-SEO nokukhushulwa ku-Net. Ukunakwa kwemininingwane nokuqonda okucacile kwemithombo yamakhasimende kuzokuvumela ukuthi uthuthukise isu elisebenzayo kakhulu lokukhuthaza iwebhusayithi.
Unentshisekelo ezinhlelweni zakho noma kumikhiqizo amakhasimende ayoqondiswa ngqo kusayithi lakho, wona, azosondela kakhulu enjini yokusesha.
Imisebenzi esemqoka yalo mkhankaso yile:
ukulungisa iphutha le sayithi,
nokwenza ngcono kwangaphakathi,
I-FullSEO isebenza kakhulu ekuziphatheni kwebhizinisi nakwezentengiso ze-elekthronikhi. Kodwa-ke, ukugxila kwikhasimende elithile kwenza lo mkhankaso ube nenzuzo yabaqalayo, osomabhizinisi abazimele abafuna ukusebenzisa iwebhusayithi yabo kakhulu.
Akekho othanda ukubhekisisa izincazelo ezinde nezinkimbinkimbi zezimpahla, izinsiza, izinkampani. Vele ubonise amakhasimende akho ukuthi yini ongayenza usebenzisa i-Chaza ividiyo eyenziwe ngabachwepheshe beSemalt. Chaza umbono wakho kuphela ngamagama ambalwa, futhi sizokusiza ukudala i-movie-reel ekhombisa inqubo yokukhiqiza, imigomo yenkampani imele ikhwalithi yezinsizakalo ozihlinzekayo kanye nomkhiqizo owukhiqizayo. Ukuhanjiswa kolwazi ngefomethi yemidiya kuzothuthukisa kakhulu umbono wayo futhi kwenze abathengi babelane ngalokho abakubonayo nabanye.
Iqembu leSemalt lizothuthukisa lo mqondo, libhale umbhalo, libheke ukukhiqizwa kwevidiyo, ukuphrinta ochwepheshe kanye nokuhlela.
Le nsizakalo ilungele kakhulu abanikazi bamabhizinisi amancane, izinkampani zokuqala, nezinkampani ezifuna ukujabulisa izethameli ezihlosiwe ngephrojekthi yazo.
Ucwaningo lokuqala lwedatha nolwazi luyisihluthulelo sempumelelo kunoma yiliphi ibhizinisi. Hlola izidingo zabathengi bese ubanikeza ngqo abakufunayo. Landela inqubekela phambili nokusebenza kwenkampani eyimbangi, thola imfihlo yempumelelo yayo, futhi usebenzise uphenyo olutholakele. I-Web Analytics yethu izokwazisa konke mayelana nokusebenza nokusebenza kahle kwesayithi lakho.
nezinsizakalo zokubheka amazinga akho emithombo ye-Intanethi,
ukuhlola amawebhusayithi ezimbangi,
ekhomba amaphutha wokusebenzisa ikhasi,
ethola imibiko yewebhu ebandakanya konke
kukhulisa ukubonakala kwewebhusayithi kuwebhu.
Noma yimuphi umsebenzisi angenza into enhle yabahlaziyi beWebhusayithi ngoba ulwazi luyithuluzi elinamandla kunazo zonke ezandleni zakho.
Uma ukwakhiwa kwesiza kubonakala kuwe kuyinto enzima kunokukhushulwa kwayo, uSemalt uzosiza ngalo msebenzi! Njengamachwephesha emkhakheni wethu, sizokwakha iwebhusayithi elungele wena. Noma ngabe kuyisitolo esiku-inthanethi, isitudiyo sobuciko esizimele, inkampani enkulu, noma ibhizinisi elilodwa-ochwepheshe bethu bazokwakha umkhiqizo omuhle kakhulu ohlangabezana nazo zonke izidingo nezifiso zeklayenti.
Ukujwayeza isikhala se-Intanethi namuhla kuguqula iwebhusayithi ibe ikhadi lebhizinisi lenkampani, ubuso bayo. Kungakho kubalulekile ukugxila hhayi kuphela ekusetshenzisweni kwenjini yokucinga komthombo osebenza online kodwa futhi nasekudaleleni ikhasi elenziwe ngobuhle. Siphinde futhi sigcine amazinga aphezulu okuphepha kwedatha ngenkathi kwakhiwa isiza. Ngemuva kokuqala komsebenzi wayo, imininingwane izoqoqwa njalo, icutshungulwe, futhi ikhishwe ngendlela yemibiko. Ngakho-ke, ungalawula ukusebenza kwesisetshenziswa sakho kusukela ekuqaleni.
Umklamo osebenzayo futhi omnandi, ukusekelwa njalo nokuvuselelwa, ukuhlanganiswa okungenaziphazamiso kwama-plugins nama-API, ukugcwaliswa kwezixazululo ze-cms - konke lokhu kuzokwenziwa yiSemalt.
Ukuphakanyiswa kwewebhusayithi kwe-SEO
Esigabeni sokuqala somsebenzi kwi-web site optimization, uzodinga ukuxhaswa kwabachwepheshe abanolwazi. Sizosebenzisa amakhono ethu, esizuze ngaphezulu kweminyaka yokusebenza okuningilizayo, ukukuqondisa ekukhuthazeni isayithi lakho. Iphakethe eligcwele lezinsizakalo zokuhlaziya izinkomba zamanje zamakhasi e-web kanye nemikhuba ye-Intanethi, ukubheka izinkinga nokuzixazulula, ukuklama nokulungisa iwebhusayithi yikho kanye okudingayo futhi ozokuthola kithi.
Izinzuzo zensizakalo yethu:
Iqembu lochwepheshe abanethalente likulungele ukubambisana amahora angama-24 ngosuku, izinsuku ezingama-365 ngonyaka. Abasebenzi bethu basebenza inqwaba yongoti abanekhono abakhuluma isiNgisi, isiJalimane, isiFulentshi, iSpanish, nesiTurkey. Ngaleyo ndlela xhumana nababhali bekhophi, abahleli bohlelo, abenzi bokuqukethwe, abathuthukisi beziza noma ubuholi benkampani, ungaqiniseka ukuthi uyaqonda futhi uyakwazi ukusebenzisa izeluleko ngezinkinga ezithile;
Sekuyiminyaka engaphezu kweyishumi, iqembu lethu elisondelene selibuthene kusuka kubachwepheshe abanethalente, abanomdlandla nabanesifiso sokusebenzisa amaphrojekthi amaningi aphumelelayo. Iminyaka yokusebenza ngokungapheli kanye nokuqongelela isipiliyoni kuvumele ongoti bethu ukupompela amakhono futhi bathuthukise uhlelo oluhlukile lokusebenziseka kwenethiwekhi.
Amaprojekthi angaphezu kwama-800,000 ayaphumelela, kanti abasebenzisi abangama-300,000 banelisekile ngekhwalithi yomsebenzi wethu;
Igalari yamaphrojekthi aqediwe iyinkomba yokuphumelela kukaSemalt ekusebenziseni imibono yayo, futhi nokubuyekezwa kwamakhasimende anelisekile kuqinisekisa ukusebenza kwezinhlelo.
Uhlelo oluguquguqukayo lwezaphulelo nokunikezwa okukhangayo okujwayelekile; isilinganiso samanani asezingeni eliphakeme. Ukhululekile ukukhetha imisebenzi oyikhethayo wedwa ngokususelwe ezimalini zakho nasekuqondisweni kwelitshe. Sinikeza uhlelo olusebenzayo lwezaphulelo nokunikelwayo okuhle kumakhasimende ajwayelekile. Ngama- $ 0,99 kuphela, ungazama Isivivinyo sethu se-AutoSeo samasonto amabili futhi ubone ukuthi iziphi izici ezikujabulisa kakhulu. Kulokhu, noma ngabe ukhetha i-AutoSeo, i-FullSEO noma i-Analytics, izinyanga ezintathu, izinyanga eziyisithupha, futhi amaphakheji wonyaka azokulethela inzuzo ye-10, 15, ne-25% ngokulandelana.
Isizathu sokuvakashela iwebhusayithi yethu
Esizeni sethu, ungazijwayeza imigomo yeSemalt nokubuyekezwa kwamakhasimende ukuze uqonde hhayi kuphela imininingwane ye-SEO kodwa nezimpawu zezindlela zokukhuthaza iwebhusayithi yethu. Ungathola futhi nalo lonke ulwazi oludingekayo mayelana nezinsizakalo ezinikeziwe nezindleko zazo kuwebhusayithi esemthethweni ye-Semalt. Uma kukhona noma yisiphi isihloko esingaxazululeki kuwe, buza umbuzo eqenjini lethu lokusekela.